Mmekọrịta: Ịkwụsị Ịchọ Inwe Mmekọahụ | Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home mmekọrịta Ịkwụsị Ọchịchọ Mmekọahụ
Ibelata agụụ mmekọahụ bụ ezigbo nsogbu na mmekọrịta ogologo oge. Ọ na - abịa n'ihi nsonaazụ dopamine n'oge enwere mmekọahụ na otu di na nwunye. N'otu oge ahụ ụbụrụ na-ebelata ọnụ ọgụgụ nke ndị na-anabata dopamine ka oge na-aga ịhazi mmetụta nke ụgwọ ọrụ nke onye ahụ kpatara. Dopamine bụ neurochemical nke na-eme ka ọchịchọ na mkpali dị. Ọ na-eto eto na ihe ọhụrụ. Mgbe 'mmiri ọgwụ ndị a na-atụ aro' na-agwụ ike, anyị nwere ike nwekwuo agụụ mmekọahụ ma ọ bụ nwee agụụ maka onye òtù ọlụlụ anyị. Anyị nwere ike ilekwasị anya n'ịrụ ọrụ ma ọ bụ ịzụ ụmụ kama. Ọ pụtaghị na anyị enweghị mmetụta ịhụnanya ma ọ bụ nkekọ na di ma ọ bụ nwunye anyị, naanị na agụụ mmekọahụ pere mpe karịa n'oge ndị ahụ, isi ụbọchị agụụ.
Mmetụta nke enweghi ntachi obi nwere ike ime ka ụfọdụ ndị chọọ ịchọta ohere ọhụụ ọhụrụ na ndị mmekọ dị njikere, mebere ma ọ bụ ezigbo. Taa, ịntanetị na-emerụ ahụ n'ọtụtụ mmekọrịta. The Coolidge Effect bụ ihe mere na-akpali agụụ mmekọahụ, ma na-akpali agụụ mmekọahụ na ịntanetị, dị mma. Akwukwo akwukwo di iche iche na ndi di ka ndi di njikere ichota ayi, na swipe, pia ma obu kpatuo. Na-enweghị Coolidge Mmetụta, a gaghị enwe ịntanetị. Ụbụrụ ụbụrụ oge ochie enweghi ike ịkọ ọdịiche dị n'etiti di ma ọ bụ nwunye na 2, ụdị nsụgharị eziokwu dị na ihuenyo.
Iji nyere aka ịmaliteghachi ọkụ ahụ, a na-atụ aro nkwalite mmekọrịta akpakọtara. Ihe ndị a bụ ihe mgbaàmà na-egosi ụbụrụ ụbụrụ nke na-enyere aka belata mmetụta nke ichepụ ma ọ bụ iwe. Lee nke a bara uru isiokwu maka nkọwa ndị ọzọ. Otu n'ime akwụkwọ kachasị mma n'ahịa na ọ bụghị nanị na-akọwapụta nhụjuanya na nkà mmụta uche nke na-emetụta ihe a ma nwee usoro ntụzi ụkwụ na-eduzi ya iji gwọọ ya, bụ Akụkụ nke Ebibi nke Cupid - Site n'Ebe Obibi na Nkwekọ na Mmekọahụ, site n'aka Marnia Robinson. Nke a nwere ike ịchọta Ebe a. Lee kwa nka podcast maka nyochaa nke isiokwu na onye edemede.
<< Ihe Mmetụta Coolidge Mmekọahụ na Porn >>